बाँके जिल्लामा एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ अधिकांश जग्गा जमिनको मालिक महिला मात्रै छन् । सो गाउँमा रहेका जग्गा, जमिन, बैङ्क खाता महिलाको नाममै रहेको छ । त्यो हो, बाँकेको जानकी गाउँपालिका–३ स्थित बन्जारेगाउँ ।
नेपालगन्जबाट करिब सात किलोमिटर पश्चिम–दक्षिणम अवस्थित सो गाउँमा मधेसी र मुस्लिम समुदायको बसोबास बढी छ ।
उक्त गाउँका बासिन्दासँग धेरै जग्गाजमिन नभए पनि भएजति सबै महिलाकै नाममा रहेको वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष बिन्देश्वरी कुर्मीले बताए ।
सो गाउँका २५० भन्दा बढी महिलाको नाममा घरजग्गालगायतको सम्पत्ति रहेको वडाध्यक्ष कुर्मीले जानकारी दिए । आफूले पनि सबै जग्गा श्रीमती कृष्णाकुमारी कुर्मीको नाममा राखेको जनाउँदै उनले श्रीमतीलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको बताए ।
बन्जारेगाउँकी ५४ वर्षीया फातिमा वागवान पनि एक कट्ठा जमिनको मालिक हुन् । डेढ वर्ष मात्रै भयो उनको नाममा एक कट्ठा जमिन दर्ता छ । फातिमाका श्रीमान्, एक छोरा र तीन छोरी छन् तर पनि ससुराले जग्गा उनकै नाममा राखे । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
१९ लाख रुपैयाँको डिजेल बोकेको ट्यांकर अपहरण
कम्प्युटर विज्ञानको परीक्षामा कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङका प्रश्न !
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आज, कुन कुन मन्त्री हुँदै छन् 'आउट' ?
बैद्यनाथ धाममा सवाँ करोड ज्याेति प्रज्वलन गरिने